CR Apartment yiCathedral - I-Airbnb
CR Apartment yiCathedral
Ifulethi eligqwesileyo nje emva kokulungiswa ngokubanzi, elisembindini wesixeko, iimitha ezingama-50 ukusuka e-ul. I-Kilińskiego - eyona nto intle, isitrato sembali e-Bialystok embindini. Nangona indawo yayo ephakathi, ifulethi lizolile, lihlala kwindawo yesikwere ehlanganiswe nemithi emidala. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye netafile yokutyela ekhululekile. Ilinen entsha kunye neetawuli, ikofu, iti, amanzi. Izixhobo eziyimfuneko zokuhlamba kunye noku-ayina. Indlu ine-smart TV kunye ne-intanethi ye-WiFi ekhawulezayo.
43" HDTV ene-I-Netflix, intambo yepremiyamu, I-HBO Max, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Eyona nto intle kwaye ngexesha elifanayo isakhiwo esixabisekileyo kwisixeko yiBranicki Palace (iimitha ezingama-50 ukusuka kwindlu), kunye nembali, igadi emangalisayo ejikeleze kuyo. Le yenye yezona ngqikelelo ze-baroque ezintle kakhulu ePoland, zibhekisa kwizindlu zasebukhosini zaseFransi.
Ezinye izikhumbuzo e-Białystok ziquka iHolo yeDolophu engaqhelekanga (iimitha ezili-100 ukusuka kwindlu) ehombisa i-Market Square, i-Archcathedral (iimitha ezili-100 ukusuka kwindlu) kunye nezinye iicawa zamaKatolika kunye ne-Orthodox. Izinto ezinomdla wokwakha ngokuqinisekileyo yicawa yaseSt. I-Rocha - Isikhumbuzo sokuBuyisa ukuzimela (i-900 m ukusuka kwindlu) - umsebenzi womakhi obalaseleyo wexesha lemfazwe kunye nenhle ngendlela yayo iCawa ye-Orthodox yaseSt. I-Ducha (i-4.2 km ukusuka kwindlu) - eyakhiwe ukusuka kwi-1980 ukuya namhlanje. Yeyona cawa inkulu yobuOthodoki ePoland, nto leyo eyenza abantu bathandabuzeke. Into eyonwabileyo e-Białystok nayo i-Podlasie Opera kunye ne-Philharmonic (i-750 yeemitha ukusuka kwindlu) - indawo yanamhlanje kakhulu, kodwa ihlanganiswe ngokugqibeleleyo nendalo.
Ngethuba e-Białystok, kufuneka u tyelele i-Kościuszko Square (iimitha ezingama-50 ukusuka kwindlu). Ngokuma kwizangqa eziphawulwe ngokukhethekileyo, sinokubona ukuba yayinjani le ndawo ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi II nasemva nje kwemfazwe.
Ummandla waseBiałystok nawo ukhuthaza iindwendwe ukuba zize apha. Ukusondela kweNarew National Park (iikhilomitha ezili-19 ukusuka kwigumbi lokuhlala), iPaki yeSizwe yaseBiebrza (iikhilomitha ezingama-48 ukusuka kwigumbi lokuhlala) kunye neHlathi laseBiałowieża (iikhilomitha ezingama-75 ukusuka kwigumbi lokuhlala) benza abakhenkethi ukuba beze ngomdla apha kwiholide ezolileyo esifubeni sendalo. . uthathe ikhefu ephithizelayo ngemihla yasemzini ikuyo. Kukwafanelekile ukutyelela i-Folwark Nadawki (i-8 km. Ukusuka kwindlu) kunye neMyuziyam yaseBiałystok Village (i-8 km. Ukusuka kwindlu) kunye ne-Supraśl (i-20 km. Ukusuka kwindlu).